SEUKI 2016: Kooxaha X. Stocklom & Dahabshiil Norway oo guulo ku bilowday + Sawirrada (Kulamada galabta) – Gool FM
Raage July 19, 2016
(Stockholm) 19 Luulyo 2016 – Waxaa shalaytoole halkiisii kasii socday ciyaaraha xagaaga Soomaalida qurbaha ee Seuki 2016 kaasoo ay ka qayb qaadanayaan 13 naadi oo ka kala socda dalalka Sweden, UK, Finland, Norway, Denmark, Austaria iyo Holland.
Waxaana shalay ciyaaray kooxaha X. Stockholm vs Nabadda UK kuwaasoo soo bandhigay ciyaar aad u xiise badnayd oo ay kooxuhu muujinayeen karti ciyaareed, waxaase 3-1 libtii ku hantiyey xiddigaha X. Stockholm.
Kulankii 2-aad ee la wada sugayey wuxuu dhexmaray kooxda tartanka dhowaan-galka ku ah ee Västrås vs Dahabshiil Norway oo dabcan ah koox guun ah oo muddo kusoo kifaaxday koobkan.
Kooxda Västrås ayaa dadaal muujisey, yeelkeede kuma fillaanin oo wuu ka gaabtay intii looga fadhiyey si ay heerkulka u gaarsiiso booskii looga baahnaa, waxaana looga badiyey 2-0 ay guushii kula galbadeen gabannada Dahabshiil Norway.
Banaadir (Austaria) vs Rinkeby Stars 16: 00
Sonpet (Finland) vs Waddani Stars (Denmark) 18:00
DEG DEG: Man United oo shaxdeeda ka reebtay Zlatan Ibrahimovic